Famerenana fotoana Pebble: Betsaka amin'ireo ihany | Vaovao IPhone
Pebble dia nanambara ny filokana vaovao amin'ity taona ity: Pebble Time. Ny smartwatch vaovao an'ny orinasa izay nanova ny tsenan'ny smartwatch dia samy nanana ny fomba fijeriny taorian'ny fampisehoana azy, saingy fahombiazana mihoapampana io, nanangona 20 tapitrisa dolara mahery teo amin'ny sehatra crowdfunding Kickstarter. Rehefa afaka volana maromaro dia efa tonga amin'ny haino aman-jery ny tarika voalohany, ary ny The Verge dia nanao ny fanadihadian'izy ireo voalohany. Raisina an-tsaina izany Notsikera manokana izy ireo tamin'ny famerenany ny Apple Watch, liana be aho tamin'izay nolazain'izy ireo momba ny Pebble Time, ary eto ianao manana ilay horonan-tsary sy ny antsipiriany lehibe indrindra.
Taorian'ny taranaka roa an'ny Pebble (tany am-boalohany sy vy) dia nanantena zavatra iray izay tena hanova ny zavatra natolotry ny mpamokatra ambiny aho, saingy ny hitako dia famantaranandro misy efijery kely, vahaolana kely ary eny, loko vitsivitsy, saingy hafa kely. Mazava ho azy, satria manasongadina ny horonantsary, ny fahitana amin'ny tara-masoandro mivantana dia tsara, kanefa ve izany manonitra izany ampy hananana efijery tsy dia mahaliana toy izany tontolo andro? Tsy lazaina intsony ny fefy goavambe manodidina ny efijery ary mampihena ny antsasaky ny famantaranandro tsy mihoatra ny antsasany.
Ny Verge dia manasongadina ny famaranana mora vidy, vita amin'ny plastika, zavatra ekeko tanteraka amin'ny fampiasako ny Pebble Original. Heveriko fa ny famantaranandro iray misy vidiny antsinjarany $ 199 miampy ny vidin'ny fandefasana dia tokony hanolotra zavatra bebe kokoa, indrindra fa ny fijerena fa ny Pebble Steel dia vidiny mitovy ary mampiditra fehy roa, hoditra iray ary vy iray. Farafaharatsiny mba napetraka eo ambanin'ny famantaranandro ny fifandraisana misy fiampangana, amin'izay dia afeninao rehefa mitafy azy ianao Ity fifandraisana amin'ny famandrihana ity dia azo ampiasaina amin'ny antsoina hoe "strap smart", izay afaka manampy sensor vaovao amin'ny Pebble Time, izay tadidintsika fa tsy misy afa-tsy accelerometer sy kompas. Ny antsipiriany manohana azy dia ilay izy mifanaraka amin'ny tady 22mm mahazatra, zavatra nitranga tamin'ny Pebble tany am-boalohany fa indrisy fa tsy tamin'ny Pebble Steel.
Ny filohan'i Pebble amin'ity famantaranandro vaovao ity dia miharihary fa tsy natao tamin'ny fitaovana vaovao, fa kosa amin'ilay rindrambaiko vaovao ampidiriny. Pebble Time, araky ny anarany, hifantoka amin'ny fotoana izy io, ary ny interface-ny dia ho toy ny «Timeline» (zotram-potoana) ahafahantsika mahita ny mombamomba ny taloha sy ny ho avy, izay nibaiko tamin'ny fotoana nitrangan'izany na tamin'ny fotoana hitranga. Ireo lalao izay alefa anio hariva, ny valiny nitranga tamin'ity tolakandro ity, ireo hafatra voarainao minitra vitsy lasa izay ... izy rehetra dia ao anatin'ny fandaharam-potoana iray ihany izay hitetezanao amin'ny alàlan'ny bokotra ara-batana amin'ny sisiny, zavatra mijanona amin'ireo kinova teo aloha.
Ny bateria dia tsy isalasalana fa ny teboka matanjaka an'ity Pebble ity. Tao amin'ny The Verge dia afaka nanamarina ny fomba fitondran-tenany izy ireo, ary na dia izany aza Tena lavitra ny 7 andro niantohan'ny marika izany, mahatratra 4 andro tsy misy olana, tarehimarika avo kokoa noho ny an'ny smartwatch misy ankehitriny (afa-tsy ireo Pebbles teo aloha, mazava ho azy), ao anatin'izany ny Apple Watch.
Miaraka amin'izany rehetra izany, ny famerenana ny The Verge dia mifarana amin'ny hevitra iray nitovy tamin'ilay nananako nefa tsy nanandrana ny fiambenana: «Ny Pebble Time dia Pebble nohatsaraina tsotra izao, saingy tsy mamaky velively amin'ny zava-baovao ao aminy. Fa raha mbola tsy nieritreritra ny hividy Pebble ianao na tsy maharesy lahatra ny smartwatches dia tsy hanova ny sainao ny Pebble Time vaovao. " Noho izany rehetra izany ao amin'ny The Verge dia nomeny taratasy 6,8 izy (amin'ny 10), izay toa mety amiko, mandra-pilazako ny naoty nomena ny Apple Watch: 7.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » Famerenana Pebble Time: mitovy kokoa
Ka ity lahatsoratra ity ve dia famerenana ny famerenana?
Mamaly ny vidiny
Izy io dia lahatsoratra iray izay mamintina famerenana pejy iray amin'ny teny Anglisy izay iray amin'ireo vitsy afaka niditra tamin'ny Pebble Time alohan'ny olon-kafa rehetra.
IV  N (@ ivancg95) dia hoy izy:
Misy ny fanahafana sinoa an'ilay paoma misy fiasa sy kalitao bebe kokoa. Raha tsy manova ny paikadin'izy ireo izy ireo dia voatondro ho voina.
Mamaly an'i IV  N (@ ivancg95)
Tokony hisaintsaina ny olona alohan'ny hangatahana efijery hd feno, efijery mikasika zavatra iray hafa. Inona no tadiavinao? Finday iray eo amin'ny tananao na famantaranandro misy fiasa fanampiny? Raha ny valinteninao no voalohany dia manoro hevitra anao aho mba hiandry 2 taona hafa hahazoana zavatra mendrika. Raha tsy izany dia ny vatokilonjy dia iray amin'ireo vitsy izay tsy manandrana ho finday kely mikorontana.
PS: Eto, ary ao amin'ny rahavavinao androany iPhone, raha tsy paoma (fa ny paoma dia misy zavatra mitovy), purria daholo ny zava-drehetra. Manana ny fahamendrehana hanao ny famerenana ny tenanao fa tsy ity ... fa mihoatra ny lahatsoratra dia mpandimby ...
Hitanao fa mamaky kely anay ianao, satria misy zavatra maro izay tsy Apple ary tena tsara tokoa izy ireo. Ary aza misalasala fa raha manana fotoana ahafahana manao famerenana ity Pebble Time ity isika dia hataontsika, tahaka ny nataoko ny iray amin'ireo Pebble and Pebble Steel tany am-boalohany tao amin'ny Actualidad iPhone.
Ity dia lahatsoratra iray izay anomezantsika ny mpamaky ny pejinay hahita ny famerenana ny pejy toa an'i The Verge, tranonkala iray izay tsy fantatry ny rehetra ary tsy ny rehetra no afaka mandika amin'ny teny Anglisy.
Jorge Rionegro dia hoy izy:
Manana fotoana vatokely aho ary faly amin'izany. ... na dia ny fotoana voalohany naharetan'ny bateria ahy nandritra ny 4 andro (nohavaoziko ny tontolon'ny famantaranandro izay novolavoliko matetika ... nilalao tamin'ny fampiharana azo alaina aho ... nohavaoziko ny tadiny indray mandeha isan'andro ...) izao miaraka amin'ny iray ampiasao ara-dalàna ary aza vonoina amin'ny fotoana rehetra. .. maharitra 7 ka hatramin'ny 9 andro tsy misy olana 🙂 Mahafantatra olona iray izay mamono azy aho amin'ny alina ary mahatratra 12 andro. .. etsy ankilany tiako ny mamaly izay misy na Gmail amin'ny feoko sy ny famatrehako. . Tsy esorina amin'ny paosinao ilay finday ...
Valiny tamin'i Jorge Rionegro
Mahamenatra ity "famerenana" ity manantena aho fa hanitsy na handinika azy io rehefa manana ny fotoana Pebble eo am-pelatananao! Tanjona kely, Apple Fanboy koa! Miarahaba anao! (Ary manana iPhone aho, saingy ity famerenana tsy mitongilana ity toa fanodikodinam-bola amiko) ny Pebble dia vokatra hafa amin'ny Apple Watch ary SW hafa, fomba iray hafa amin'ny vokatra izany, ampiasao izy ary lazao amiko. Miarahaba anao!
Tsy ny hevitro io fa an'ny The Verge, saingy ny hevitro ary ahy io, koa tsy hanova azy aho.
Nora Applied dia hoy izy:
- Talohan'ny fiambenana paoma, ny Pebble no smartwatch tsara indrindra mifanaraka amin'ny iOS. Ankehitriny dia efa saika fako io. Tsy maintsy mijery ny azy isika.
- Izay liana amin'ny famerenana fotoana Pebble tena izy dia manana amin'ny teny Espaniôla amin'ny fiteny Gizmodo, ary iray hafa amin'ny teny Anglisy ao amin'ny Verge (fampitaovana).
- Toy ny amin'ny Apple Watch, amin'ny Pebble Time dia tsy tsara daholo (ary hoy ny olona iray manantena ny Time Steel). Betsaka ny zavatra azo kiana.
- Gaga aho tamin'ny horonan-tsary ny fahaizan'ny Time mijery eny ivelany (efijery taratra) ary ny faharatsiany hita ao anaty trano amin'ny hazavana ambany. Ny mifanohitra amin'ny Apple Watch fotsiny.
Valio amin'i NoraApplelizada
Ahoana ny fomba hanondranana ireo Contact Google amin'ny iPhone-ko